ဇော်သစ် – မိအေးရေးတဲ့ ဒိုင်ရာယီ (၀တ္ထုတို) – MoeMaKa Burmese News & Media
တော်ကတော့ ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားပြီး၊ ဘယ်ဘဝဘယ်ဆီရောက်နေမှန်းမသိတော့ အခု မိအေးကြုံတွေ့နေရတဲ့ လောကဓံအပူလှိုင်းတွေကို ဘယ်သိနိုင်တော့မလဲနော်။ တော့်လို လူမှန်သူတော်ကောင်းကြီးက ဘုရားဟောအရဆိုရင်တော့ ကျုပ်ထက်သာတဲ့၊ ကောင်းတဲ့၊ မြင့်မြတ်တဲ့ ဘုံဘဝကို ရောက်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျုပ်ယုံကြည်ပါတယ်တော့။
ကျုပ်မှာတော့ အဲလိုမဟုတ်ဘူး ကိုရင်ဖိုးချုပ်ရေ…။ လောကဓံအပူမီးအပေါ် အိမ်ထောင်ရေးကံဆိုးမှုတေက ထပ်မံအရိပ်မိုးလို့ ကံဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွာဆဲပါပဲ ကိုးရင်ဖိုချုပ်ရယ်…။ ကျုပ်လေ တော်ဆုံးပါးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း တစ်အိမ်ထောင်မ ကောင်း၊ တစ်အိမ်ထောင်ပြောင်းခဲ့တာ။ အခုဆို နှစ်လင်ကွာ၊ တစ်လင် တို့လို့တန်းလန်း၊ နောက်တစ်လင်မျက်စပစ်နေတဲ့ မုဆိုးတစ်ပိုင်း မိန်းမရိုင်းကြီးကို ဖြစ်လို့…။
ယောက်ျားတွေကိုလည်း အပစ်မဆိုသာပါဘူး။ ကျုပ်ဆိုတဲ့မိအေးကိုက ယောက်ျားမရှိရင် မနေတတ်တဲ့စိတ်က အားနဲချက်လို ဖြစ်နေပြီ။ နောက်ပြီး တော်မကြိုက်တဲ့ကျုပ်ဝသီကလည်း မီးလောင်ရာလေပင့်ပေါ့တော်။ တော်လည်း သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ တော်ရှိတုန်းကတည်းက ကျုပ်က ယောက်ျားမကျေနပ်ရင် လမ်းမပေါ်ထွက် တစ်ညလုံး လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့စိတ်ဝေဒနာက ကောင်းကောင်း မပျောက်သေးဘူးလေ။
“ဟဲ့ မိအေး လွတ်လပ်သယ်ဆိုပြီး လမ်းပေါ်ထွက် လုပ်ချင်ရာ လုပ်ရင် နင်ဖာဖြစ်လိမ့်မယ်” လို့ ကိုရင်ဖိုးချုပ် ပြောခဲ့ဖူးတာ ကိုလည်း ကျုပ်မမေ့ပါဘူးတော်။ “မိအေးနင်နော် နင့်အချိုးတွေ မပြင်လို့ကတော့ နှစ်ခါမက သုံးလေးခါနာလိမ့်မယ်”လို့ ဂရုဏာဒေါသော သတိပေးဖူးတာလည်း ကျုပ်မမေ့ပါဘူးတော်။ ဒါပေမယ့် ခက်တယ် ကိုရင်ဖိုချုပ်ရေ…။ အိမ်ထောင်ဦးစီးယောက်ျားနဲ့အဆင်မပြေတိုင်း အချိန်မရှိအချိန်ရှိ ရွာရိုးလျှောက်ချင်တဲ့ ကျုပ်သောက်ကျင့်က ပြင်မရတော့ဘူးတော့။
အခုနေခါ ကိုရင်ဖိုချုပ်သာ ကျုပ်ဘေးနားရှိရင်လည်း အကောင်းသားပေါ့တော်။ ကျုပ်မလိမ်မာသမျှ စကားကြမ်းကြမ်းကြီးတွေနဲ့ နားပေါက်အောင် ပြောတတ်တော့ အထိမ်းလေးတော့ ရှိသေးသဟာပေါ့။ ဒါလည်း မရှိကာမှသာ ပြောရတာပါလေ။ ရှိတုန်းကတော့ ကျုပ်လည်း တော့်ကို အပြောအဆိုမတတ်တဲ့ လူ့ဂွစာကြီးလို့တောင် ထင်ခဲ့သေးသဟာပဲ။ တော်ရှိနေရင်လည်း ကျုပ်ရဲ့အနေအထိုင်မတတ်မှုကြောင့် တော်ပါရောနာမည်ပျက်နိုင်တယ်။ တစ်ခါတစ်ခါကြတော့လည်း တော့ကိုသေအောင် ချောင်းရိုက်လိုက်တဲ့ လူမိုက်လူရမ်းကား မောင်စောတို့အဖွဲ့ကို ကျုပ်က ကျေးဇူးတောင် တင်မိသလိုလို…။ မဟုတ်ရင် အ မိုက်မမိအေးနှိပ်စက်သမျှ ကိုရင်ဖိုချုပ် ကော့နေအောင် ခံရမှာ…။ အခုတော့ တော်ပါသေးရဲ့…။ မောင်းမင်းကြီးသားလူမိုက် မောင်စောတို့အဖွဲ့ ကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်ကြပါစေတော်…။
တစ်ခါတစ်ခါကြတော့လည်း ဘဝဒုက္ခအပူတွေက အရူးမီးဝိုင်းသလို ဝိုင်းလာတဲ့အခါ၊ မိအေးရဲ့အားကိုရာရွှေတောင်ကြီး ကိုရင်ဖိုးချုပ်ကို ကျုပ် အပြင်းအထန် တမ်းတမိပေသပေါ့…။ အခုလည်း ကိုရင်ဖိုးချုပ်ကို သတိရလို့ ကျုပ်ဈေးသွားရင်း လေး ကြောင်းမျဉ်း ဗလာစာအုပ်လေးတစ်အုပ်ဝယ်…။ ကိုရင်းကို တိုင်တည်ပြီး စာလေးတွေ ရေးမိနေပြီ။
မြို့ထဲက ကျုပ်နေ့တိုင်း အဝတ်လျှော်ပေးရတဲ့အိမ်က သူဌေးသမီး စာရေးဆရာမလေးကပြောလို့ပါ။ သူက ပြောတယ်။ “ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ခံစားချက်တွေ မွန်းကြပ်လာရင် သမီးကတော့ စာတစ်ပုဒ်ရေးပစ်လိုက်တာပဲ။ အဲဒါဟာ ရင်ထဲမှာ ပြည့် ကြပ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေကို ဖောက်ချနည်းတစ်မျိုးပဲတဲ့။ အဲသလို ဖောက်ထုတ်လိုက်ရင် ပေါ့သွားရောတဲ့။ ဘဝမှာ အဆင် မပြေမှုတွေများလွန်းလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းလေး ဖြစ်ဖြစ်။ လက်ရှိကိုယ်ခံစားနေရတာလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရေးသင့်သတဲ့။
ကျုပ်တော့ သိပ်နားမလည်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူဌေးသမီး ခေတ်ပညာတတ်ကလေးက ပြောတာဆိုတော့ စမ်းလုပ်ကြည့် သင့်တယ်လို့တော့ ထင်မိတယ်။ နောက်ပြီး ဒီနေ့ကျမှ ထူးထူးချားချား ကိုရင်ဖိုးချုပ်ကို ကျုပ်လေ သိပ်သတိရတာပဲတော်…။ ဒါကြောင် အဲဒီစာရေးဆရာမလေး ပြောသလို လုပ်ကြည့်မိတာပါပဲ။
ကိုရင်ဖိုးချုပ်သာရှိရင်… “မိအေးရယ် နင် ဘာအရူးထပြန်တာတုန်း” လို့ ကျုပ်ကို ဆူဦးမှာမဟုတ်လား။ မဆူပါနဲ့ ကိုရင်ဖိုး ချုပ်ရယ်…။ အခုလေ ကျုပ်ရင်ထဲမှာ သိပ်ကို မွန်းကျပ်လွန်းလို့ပါတော်…။
ကျုပ်လေ ကိုရင်ဖိုးချုပ် ဆုံးသွားပြီး သိပ်မကြာဘူး။ ကျုပ်တို့ရွာက ကိုရင့်ငယ်သူငယ်ချင်း ဘုရားလူကြီး ကိုရင်နုနဲ့ ညား သတော့။ တော်ဆုံးသွားတော့ ကျုပ်မှာ အားကိုးရာကလည်း မရှိ။ ကိုရင်နုက ကိုရင့်သူငယ်ချင်းလည်းဟုတ်။ ကိုရင်ဖိုချုပ် ရှိစဉ်တုန်းက အကိုကြီးလိုအားကိုးရသူကလည်း ဖြစ်ပြန်။ ဘုးရားသမားတရားသမားဆိုတော့ကျုပ်လည်း ဟန်လိမ့်မယ်ထင်ပြီး ယူမိသဟာပေါ့တော်။
ယူပြီးမှ ငါးပါးမှောက်မှန်း သိရတော့တာပါပဲ ကိုရင်ဖိုးချုပ်ရယ်…။ ဘုရားတတာလိုလို၊ တရားရားရတာလိုလိုနဲ့ ကိုရင်နုဟာ အိမ်ထောင့်တာဝန်တွေ မကျေပွန်ဘူးတော့။ ဓားပြလာလို့လည်း အော်ရကောင်းမှန်းမသိ။ သုခိုးကပ်လို့လည်း ငေါက်ရ ကောင်းမှန်းမသိတဲ့လူစားမျိုးတော့…။ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို ကောင်းကောင်းမွန်မထိမ်းနိုင်ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ သူ့အ ကြောင်း သူသိ၊ တောထွက်သွားတယ်။ ဆိုးတာက သူတောမထွက်ခင် ရွာက မဆလာစက်ပိုင်ရှင် တရုတ်စပ် ကိုနင်းဝေ လက်ထဲ ကျုပ်ကို ထိုးအပ်ခဲ့တာပါပဲ။
သူကတော့ တရားရှင်ကြီးပေါ့လေ။ မနှိုင်းကောင်း၊ နှိုင်းကောင်း။ ကိုယ့်ဇနီးမယားကိုတောင် ကြည်ဖြူစွာပေးလှူနိုင်တဲ့ အလောင်းတော် ဝေသန္တရာကြီးပေါ့လေ…။ ကျုပ်မှာတော့တော် ကိုနင်းဝေ (ကိုနှင်းဝေဟု ဆိုလိုဟန်ရှိ) လက်ထဲ ပစ်တောင်း စကာ သူထိုးအပ်ခဲ့လို့ မချစ်ပဲနဲ့က အောင့်နမ်းရသေး။ ကိုနင်းဝေ နင်ပဲငဆလုပ်သမျှ အံကျိတ်လို့က ခံရသေး။ ပြောကို ပြောချင်တော့ပါဘူး။
“လွတ်လပ်သယ်ဆိုပြီး လမ်းပေါ်တက် လုပ်ချင်ရာ မလုပ်နဲ့ မိအေး…။ နင်ဖာဖြစ်သွားမယ်” လို့ ကိုဖိုးချုပ် ပြောခဲ့တဲ့စကား ကျုပ်အမြဲကြားယောင်ပြီး၊ ကျုပ်ကိုယ့်ကျုပ် ဆင်ခြင်ပါသယ်တော်။ အိမ်ထောင်မှုကိုလည်း နိုင်နင်းအောင် ထိမ်းပါသတော့။ မထိမ်းလို့လည်းမရဘူးလေ။ မဆလာစက်ပိုင်ရှင် ကိုနင်းဝေက သူကသာ မိန်းမရှုပ်ချင် ရှုပ်မယ်။ ဖဲရိုက်ချင်ရိုက်မယ်။ အရက် သောက်ချင်သောက်မယ်။ သူ့အောက်လက်ငယ်သား အလုပ်သမားတွေနဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုအပေါ်မှာတော့ စည်းကမ်းတင်း တင်းကျပ်ကျပ်နဲ့ကို အုပ်ချုပ်သတော့။
ဒါပေမယ့် သိတယ်မဟုတ်လား။ ကျုပ်ကလည်း လင်မရွေးတဲ့ ရှင်အေးလေ…။ ကြာလာတော့ ကိုနင်းဝေရဲ့ ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့ ငါပြောသလိုလုပ်ဆိုတဲ့စည်းကမ်းတွေ။ သူသာသုံးဖြုံးပျော်ပါးနေပြီး ကျုပ်ကို လှအောင်မဆင်၊ ဝအောင်မကျွေးတဲ့ဒဏ်တွေကို ကျုပ်မခံနိုင်တော့ဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း ညအချိန်မတော် လမ်းပေါ်တက် ရွရိုးလျှောက်ပစ်လိုက်တာပေါ့…။
အဲဒီမှာ စစ်ပြန်တပ်ကြပ်ကြီးမောင်စိန်နဲ့တွေ့တာပဲ။ စစ်ပြန်ကြီးမောင်စိန်က ငမူးငရူး။ အစကတော့ ကိုနင်းဝေ မဆလာ စက်ထဲက တပည့်လူရုံဆိုပါတော့။ ဒါပေမယ့် မူးကလည်း မူးနေ။ မိုက်ကလည်း မိုက်။ ညအချိန်မတော် မိန်းမသား တစ် ယောက်တည်း လူပြတ်တဲ့ရွာလယ်လမ်းပေါ် တစ်ယောက်တည်းတွေ့တော့ စိတ်မထိမ်းနိုင်ရှာတော့ဘူး ထင်ပါရဲ့…။ ကျုပ်ကို ဇွတ်အတင်းဗလက္ကာယ ပြုတော့တာပဲ။ မောင်စိန်ကို ကျုပ်လျှာ့တွက်မိတာ ကျုပ်မှားတာပါတော်။ မောင်စိန်က အသိဉာဏ် မရှိတော့ ငါ့အလုပ်ရှင်၊ ငါ့ကျေးဇူးရှင်ရဲ့မယားပါလားလို့လည်း မစောင့်စည်းတော့ဘူး…။ ကြမ်းလိုက်တာမှ လွန်ရော…။
ကျုပ်တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် မောင်စိန်လိုလူမျိုးတစ်ခါမှကို မတွေ့ဖူးဘူး။ တကယ့်နသိုးကြိုးပြတ်။ ပထမတော့ ကျုပ်လည်း ရုန်းပါ၊ အော်ပါသေးတယ်။ မိန်းမနဲ့ယောက်ျားက ဖြစ်ပြန်။ တစ်ရွာလုံးကလည်း အိပ်မောကျ။ ကူသူကယ်သူမဲ့တဲ့ဘဝနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ မောင်စိန့်အလိုလိုက်ရတော့တာပါပဲ။
ဒီသတင်း ကိုနင်းဝေသိတော့ မသတီဘူးဆိုပြီး မောင်စိန်နဲ့ကျုပ်ကို ဇွတ်ပေးစားတော့တာပဲ။ ကျုပ်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် မချစ်မနှစ်သက်သောသူနဲ့ ပေါင်းသင်းရပြန်ကရော…။ ရီတော့ရီရသား..။ အဲဒီအချိန်ကျမှ တရားရှင်ကြီးကိုရင်နုက ပြန်လာပြီး သူသာလျှင် လင်ကြီးပါ လာလုပ်သေးသတော့…။ မောင်စိန်က ဘယ်ပေးလိမ့်မတုန်း.. အဟင်း… ဟင်း…။
အပိယေဟိ သမ္ပရောဂေါဒုက္ခောက မိအေးဘဝအတွက် ဆန်းမှမဆန်းတော့တာပဲ ကိုဖိုးချုပ်ရယ်…။ ကိုနုကို မချစ်ပဲနဲ့ တော် မရှိတော့ အားကိုရာလို့ သဘောထားပြီး ယူခဲ့တယ်။ ကိုနုက ဝေသန္တရာလုပ်တော့ တစ်ခါ မဆလာစက်ပိုင်ရှင်ကိုနင်းဝေကို အောင့်ကာနမ်းရပြန်တယ်။ နောက်တော့ မောင်စိန်မုဒိမ်းသမားကြောင့် ကိုနင်းဝေက စွန့်ပစ်။ မောင်စိန့်မယား ဖြစ်ရပြန် ရော…။ ကျုပ်ဘဝဆိုးလှပါသတော်…။
ဘာပြောပြော ကျုပ်လေ…။ ပတ်သက်ခဲ့သမျှ ယောက်ျားတွေထဲ တော့်ကိုတော့ အချစ်ဆုံးပါတော်။ လျှာအရိုးမရှိတိုင်း ပြော တယ်လို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ မိအေးရဲ့အချစ်ဦး၊ အချစ်ရူး၊ အချစ်စုဗူးကြီးကို ယနေ့အထိ တမ်းတနေဆဲပါပဲ။ ရှိတုန်းကတော့ လူကတ်၊ လူ့ဂွစာ၊ ဆူးလှည်းလို့ ထင်ခဲ့မိသမျှ တော်မရှိမှ တော့်စကားတွေ သွေးထွက်အောင်မှန်မှန်း ကျုပ်သိလာရပြီတော့။ သွားလေသူကျုပ်ယောက်ျား ကိုရင်ဖိုချုပ်ဟာ လူရိုးတထစ်ချသမား။ အမှန်တရားဘက်တော်သား။ တုန်းဆိုတိုက်၊ ကျားဆိုကိုက်မယ့် လူသူတော်ကောင်းကြီးဆိုတာ ကျုပ်လေ တဖြည်းဖြည်းနားလည်လာနေပြီတော့…။
ကိုနင်းဝေ တစ်ဖက်ဆောင်းနင်း လုပ်သမျှ ဆိုးလှသယ်မှတ်တာ။ မောင်စိန်က ပိုဆိုး။ အလွန်ဆိုး…။ အပြန်တရာဆိုးသတော့…။
မောင်စိန်ရဲ့လက်ကို ကိုနင်းဝေက ဝါးကွက်အပ်လိုက်တော့ ကျုပ်လည်း ရွာတောင်ပိုင်းက မောင်စိန့်အိမ် ပြောင်းနေရတာပေါ့။ ဖြစ်ချင်တော့ မောင်စိန်က လူပျိုလူလွတ်မဟုတ်ဘူး။ သားကြီးမယားကြီး ရှိတယ်။ အမျိုးအသိုက်အဝန်းကလည်း အများ သား…။ မောင်စိန်တို့က သူတို့ အမျိုးတွေစုပြီး ဝန်းအကျယ်ကြီးထဲမှာ အိမ်ကလေးတွေ ဆောက်နေကြတာလေ။ ကိုးရင်ဖိုးချုပ် သိတယ် မဟုတ်လား။ တော်ရှိစဉ်တုန်းက ဆင်းရဲလွန်းလို့ဆိုပြီး ကျွေးမွေးပေးကမ်းထားတဲ့ ကဘိုးတော်ရဲ့အဆွယ်အပွား တွေလေ..။
တော်လည်းရှိ၊ ကဘိုးတော်လည်းမသေခင်တုန်းကတော့ တော်ပေးကမ်းထားတဲ့ကျေးဇူးတွေကို သူတို့က သိကြသပေါ့တော်။ တော်ကလည်း မရှိ။ ကဘိုးတော်ကလည်းဆုံး…။ ကျုပ်ကလည်း မောင်စိန့်မယားငယ်အဖြစ်နဲ့ သူတို့ဝန်းကြီးထဲ ဝင်လာ တာဆိုတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ ကျုပ်ကို ဝိုင်းပြီးပညာပေးလိုက်ကြတာ။ ရစရာကို မရှိဘူး။
မောင့်စိန်မယားက နှိပ်စက်။ သားကြီး၊ သမီးကြီးတွေက နှိပ်စက်။ တစ်ခုခုဆို အမျိုးတွေက ဝိုင်းရန်ထောင်ကြနဲ့ ကျုပ်ဖြင့် ဖွတ်သပ်ဖတ်သပ်ကို လိုက်လို့…။ အရင်လို ယောက်ျားမကြေနပ်လို့ ရွာရိုးလည်း မလျှောက်ရဲဘူး။ မောင်စိန်က ထစ်ခနဲဆို ကျုပ်ခြေထောက်ကို အရင်ရိုက်ချိုးတာ။ မထနိုင်အောင် လုပ်တာပေါ့တော်။ “ဟဲ့မိအေး… မဆာလာသယ် နင်းဝေလက်ထဲ နေတုန်းကမှ နင်းဝေတစ်ယောက်တည်းက နှိပ်စက်တာ။ အခုတော့ မယားကြီးရော၊ သားတွေသမီးတွေရော၊ အမျိုးအဆွေ အဆွယ်အပွားတွေရော အကုန်နှိပ်စက်တာ ခံရပြီမဟုတ်လား။ တဆိပ်ရှိ လမ်းပေါ်ထွက်ချင်တဲ့ကောင်မ။ ခံဟဲ့… ခံဟဲ့” လို့တောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျိန်ဆဲမိပါရဲ့…။
အော်ဒါနဲ့ ပြောရဦးမယ်..။ အခု ကျုပ်တို့ရွာက အရင်လို ရွာလေးမဟုတ်တော့ဘူး။ မြို့ဖြစ်သွားပြီတော့။ မန္တလေးမြို့ကြီးက တဖြည်းဖြည်းချဲ့လာလိုက်တာ အခုဆို ကျုပ်တို့ရွာလေးဟာ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်ထဲပါပြီး၊ ရပ်ကွက်တောင် ဖြစ်နေပေါ့။ မောင်စိန်ကလည်း အခုဆို ရိုးရိုးစစ်ပြန်တပ်ကြပ်ကြီး မဟုတ်တော့ဘူး။ ရပ်ကွက်လူကြီး ဖြစ်နေပြီတော့။
မောင်စိန်က ရပ်ကွက်လူကြီး ဖြစ်သွားတော့ အရင်လိုတော့ ကျုပ်ကို သိပ်မနှိပ်စက်တော့ပါဘူး။ မောင်စိန့်မယားတွေ၊ သားသမီးတွေ၊ ဆွေမျိုးအဆွယ်အပွားတွေလည်း နဲနဲတော့ ကိုယ်ရှိန်သတ်သွားတယ်။ နှိပ်စက်ချင်ရင်တောင်မှ ပညာသားပါပါ လေးနဲ့ နှိပ်စက်တာပေါ့..။ အရပ်က ဝိုင်းပြောကြလွန်းလို့ ထင်ပါရဲ့။ ရပ်ကွက်လူကြီး ဖြစ်သွားတော့ အနေအထိုင်ဆင်ခြင် ကုန်တဲ့သဘော…။
“ဒါဆို မိအေး နင် အေးပလားဟဲ့”လို့ တော်ကမေးရင်တော့ “မအေးသေးပေါင်တော်” လို့ပဲ ကျုပ်က ဖြေရမှာပါပဲ။ “အစကရိုးရိုး နောက်တော့တစ်မျိုးတိုးလို့ ဆိုးပြန်ဆိုပဲ…. ဆိုပဲ…” လို့ သီချင်းလေးနဲ့တောင် ပြောစမ်းချင်ပါရဲ့…။
ကျုပ်တို့ရွာလည်း မြို့စာရင်းပေါက်။ ရပ်ကွက်လည်း ဖြစ်ပြီးဆိုရော မန္တလေးမြို့မြေဈေးတွေက တရိပ်ရိပ်တက်လာတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ တရုတ်တွေသာ အဝယ်များတာပေါ့ ကိုဖိုးချုပ်ရယ်…။ မြေဈေးတွေကတက်။ မြေအရောင်းအဝယ်တွေက နေတိုင်းလောက်ဖြစ်ဆိုတော့ စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေပါ ပါလာရော…။ အဲဒီတော့ အသိသက်သေလိုလို၊ ပွဲစားလိုလိုနဲ့ မောင်စိန်တို့ တန်ခိုးထွားလာတာပေါ့။ အရောင်းအဝယ်တင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ အပေါင်အနှံတွေပါပါလာတယ်။
များသောအားဖြင့်ကတော့ ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့တရုတ်တွေပါပဲ…။ မောင်စိန်ကလည်း ကိုယ့်လူမျိုးခြင်းသာ မျက်နှာသာ မပေးတယ်။ တရုတ်ဆိုလိုကတော့ အသေခင်။ အသေကြောက်..။ “တရုတ်လူမျိုးက ငါ့ကျေးဇူးရှင်ကွ” လို့တောင် လူပုံအ လယ် ထုတ်ပြောသယ်ဆိုပဲ။
သူနဲ့အတွဲဆုံးကတော့ တရုတ်သူဌေးလောင်စီကွေးပဲ။ အဲဒီလောင်စီကွေးက ရပ်ကွက်ထဲမှာ မြေကွက်တွေအများကြီး ပိုင်တယ်။ ဝယ်လည်းဝယ်တယ်။ အပေါင်လည်း ခံထားတယ်။ ဝယ်တယ်ဆိုတာလည်း တန်ရာတန်ကြေးပေး ဝယ်တာ ကနဲနဲရယ်…။ မောင်စိန်ကို ပွဲခကောင်းကောင်းပေးပြီး ဗိုက်နာတဲ့အိမ်တွေကို အောက်ကြေးနဲ့ဝယ်တာ။ တစ်ချို့ပြန်မရွေးနိုင်တဲ့အိမ်တွေကိုလည်း မောင်စိန့်ပါဝါသုံး၊ သိမ်းလားသိမ်းရဲ့။
သူတို့ဟာသူတို့ ယောက်ျားသားချင်းစီးပွားလုပ်ကြတာ ကျုပ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးတော်။ ကျုပ်နဲ့ဆိုင်တာက အဲဒီတရုတ်သူဌေးလောင် စီကွေးရဲ့ တဏှာရူးလုပ်ရပ်ပါ။ လောင်စီကွေးက မောင်စိန့်အိမ်ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့လာတိုင်း ကျုပ်ကို အဆီပြန်နေတဲ့မျက်နှာ ပေါ်က ရမ္မက်ခိုးဝေနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်တတ်သတော့…။ ကျုပ်ဖြင့် ရွံလွန်းလို့…။
ဒီအကြောင်း မောင်စိန့်ကို ပြောပြတော့ မောင်စိန်က ကျုပ်ကို ဘာပြန်ပြောတယ်မှတ်လဲ။ “ဟဲ့ မိအေး သူက ငါတို့ ကျေးဇူး ရှင်ဟ။ သူ့ကိုလည်း ငါက ကြောက်ရတယ်”တဲ့။ စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ့ဦးတော်။ ဒါ အိမ်ထောင်ဦးစီး ယောက်ျားတစ်ယောက် ပြောရမယ့်စကားလားလို့။ အဲဒီတရုတ်သူဌေးအပေါ် တစ်ခုခု အဆက်အဆံ မှားယွင်းတာနဲ့ ကျုပ်တော့ နာပြီပဲ။ မောင်စိန့် မယားတွေ၊ သားသမီးတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေကပါ ကျုပ်ကို အနုနည်းနဲ့ နှိပ်စက်ကြတယ်။ မကြေနပ်လို့ ကိုယ့်ယောက်ျားကိုယ် တော့်တုန်းကလို ဆန္ဒပြမယ်မကြံနဲ့။ မောင်စိန်က ကျုပ်ကို ခြေထောက်ရိုက် ချိုးတာတော့…။
ကြာလာတော့ မိအေးဆိုတဲကံမွဲမကို အိမ်ထောင်ဦးစီးယောက်ျားလုပ်သူကပါ ကာကွယ်မပေးဘူး ဆိုတာတွေကို လောင်စိ ကွေးက သိလာတယ်။ ပိုပိုပြီးအတင့်ရဲလာတယ်။ အကြည့်တင်မကတော့ပဲ။ စကားနဲ့ ထိကပါးရိကပါးပေါ့…။ မောင်စိန်ကို တိုင်တော့ မောင်စိန်က “အဲဒါ နင် အနေအထိုင်မတတ်လို့ ဖြစ်တာ” ဆိုပြီး ကျုပ်ကိုပဲ လိမ့်ရိုက်ပြန်ရော…။
နောက်တော့ စကားတင်မက လက်ပါပါလာတယ်။ ကျုပ်ဖြင့် ပြောရတာ ရှက်လည်း ရှက်ပါရဲ့။ ရှက်လည်း ရှက်တော့ပါဘူး။ ကျုပ်ကတောသူဆိုတော့ ဗွင်းဗွင်းပဲ ပြောတတ်တယ်။ နားနဲ့မနား ဖဝါးနဲ့တာနာပါတော့ ကိုဖိုးချုပ်ရယ်…။ လောင်စီကွေးကလေ လစ်ရင်လစ်သလို ကျုပ်ကို နို့ကိုင်တာ။ ဖင်နှိုက်တာတွေပါ လုပ်လာတယ်တော်။
တစ်ခါသားဟာများဆို မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ကျုပ်ကို လူလစ်ပြီအထင်နဲ့ အတင်းဖက်နမ်းတာ။ ဗြုံးဆို ကိုမောင်စိန်ရောက်လာတယ်။ အမယ် ကိုမောင်စိန်က မျက်နှာတစ်ချက်မပျက်ဘူးတော့…။ အမလေး ကျုပ်ဖြင့် အံ့သြကိုယူတယ် ကိုဖိုးချုပ်ရယ်…။
အိမ်ထောင်ဦးစီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီတရုတ်ကို ဒီလောက်ကြောက်ရသလားဆိုပြီး ကျုပ်လည်း အိမ်ပေါ်က တစ်ခါတည်း ဆင်းလာခဲ့လိုက်တာပဲ။ ကျုပ်ကို “အဖြစ်မရှိတဲ့မိအေး… မတရားတာ ခေါင်းငုံ့ခံနေတယ်”လို့ အပြစ်တင်မစောလိုက်ပါနဲ့ ကိုရင်ဖိုးချုပ်ရယ်…။
အခုဆို မောင်စိန့်ကို သက်ဆိုင်ရာကနေ ဥပဒေအတိုင်းကွာရှင်းခွင့်ရဖို့ ကျုပ်က တောင်းဆိုထားပြီတော့။ သူလာခေါ်လည်း ကျုပ်က မလိုက်တော့ဘူး။ ဟိုတလောကတော့ မောင်စိန်က ကျုပ်ကို သူများအိမ်မှာ အဝတ်လျှော်ထမင်းချက်လုပ်။ ပင်ပင်ပန်းပန်း ရှာစားနေရသာ မကြည့်ရက်လို့ဆိုပြီး၊ ဆန်းကလေး၊ ဆီကလေး လာပေးသေးတယ်။ ပေးမှာပေါ့ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလဆို သူနဲ့ကျုပ်ရဲ့လင်မယားခန်းကို ရုံးတော်က အမိန့်ချတော့မလေ…။ ကျုပ်လည်း မရှိအားပြုပြီး သူပေးတာ လေးတော့ ယူမိတာပေါ့တော်။ ဒါပေမယ့် မောင်စိန်လို လူညစ်ကို ဒီတစ်သက်ပြန်ပေါင်းဖို့တော့ စိတ်မကူးတော့ပါဘူး။
လင်ပြေးရင် ရင်မအေးတဲ့တော်ကြီးရဲ့မိအေးကလည်း မခေပါဘူး။ အခုဆို ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ့်သူကို လင်စံရွေးပြီး မျက်စပစ်ထားပြီ။ ဒီတစ်ယောက်နဲ့ဖြင့် ကိုယ့်အတွက်လည်း ဘဝနောင်ရေး စိတ်အေးရပြီလို့တော့ ထင်မိတာပဲ။ သူ့နာမည်က မောင်ဒေါင်းတဲ့။ ကျုပ်ထက်တော့ အသက်နဲနဲငယ်တယ်။ “မမမိအေးကို ကျွန်တော်က လူပျိုပေါက်ကတည်းက မေတ္တာမှန်နဲ့တစ်ဖက်သတ်ချစ်နေရတာပါ” လို့တော့ ပြောတာပဲ။
အရွယ်ကလည်းငယ်၊ ရုပ်ကလေးကလည်းရှိ။ အလုပ်ကတော့ ကဗျာဆရာဆိုလား။ ကဗျာဆရာဆိုတော့ အပြောကလည်း ကောင်းမှကောင်း။ ဒါနဲ့ကျုပ်လည်း သူ့အပြောမှာကျပြီး တစ်သက်တာအိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ် ရွေးမိတော့တာပဲ။ တော် မသိလို့ပါ။ မောင်ဒေါင်းက တော်နဲ့တောင် စပ်ရင် ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်ဦမယ်။ အေးလေ…. ကိုရင်ဖိုးချုပ်က ဘယ်သိမလဲ။ တော်ရှိတုန်းက မောင်ဒေါင်းက မွေးမှ မမွေးသေးတာ…။
မောင်ဒေါင်းက ရုပ်ရည်ချောတာကတစ်ကြောင်း။ အပြောကောင်းတာကတစ်ကြောင်း။ ကျုပ်သိပ်ချစ်ရတဲ့လင်ကြီးကိုဖိုးချုပ်နဲ့ ဆွေမျိုးမကင်းတာကတစ်ကြောင်း ကျုပ်ဖြင့် သူ့ကို သိပ်ချစ်တာပဲ။ ချစ်ဆို ကျုပ်နဲ့သူနဲ့ရဲ့ချစ်ခရီးလမ်းကလည်း လွယ်လွယ် ကူကူ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာမှ မဟုတ်တာ။
မောင်ဒေါင်းကို ကျုပ်က သိပ်ချစ်မှန်းသိတော့ မောင်စိန်က ချက်ချင်းကွာမပေးပဲ အချိန်ဆွဲထားတယ်။ ရုံးတော်က တရား သူကြီးတွေကိုလည်း ရုံးချိန်းတွေ ခွာချိန်းအောင် လာဘ်ထိုးထားတယ်ဆိုလား။ အခုဆု ကျုပ်တို့အမှုက ငါးနှစ်ပါးတောင် နီး ပေါ့။ ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်က သိပ်ချစ်တော့ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ဘာမှမဘာရပဲ အကြာကြီး မနေ နိုင်ကြဘူးလေ…။ ဒီတော့ မောင်စိန်နဲ့သူ့လူတွေ မသိအောင် ခိုးပေါင်းနေကြရတာပေါ့…။
ဒါကိုသိတဲ့ မောင်စိန့်တပည့် ကိုဝမ်းထင်ကလည်း ကျုပ်လက်ရှိနေနေတဲ့ ကျူးတဲလေးကို လာလာပြီး ငွေညှစ်တတ်တယ်။ ရဟန်းလူထွက် မောင်ဘသောင်းကလည်း ရပ်ကွက်ထဲကလူမျိုးခြားတွေကို အကြောင်းပြ။ သူ့ဆရာ မယားငယ်ကို လူမျိုး ခြားရန်က ကာကွယ်မယ်ဆိုပြီး မဆီမဆိုင် ကျုပ်ကျူးတဲလေးရှေ့ ဓားတစ်ကိုင်ကိုင် ဟန်ရေးပြတာက ရှိသေး။ မောင်ဘ သောင်းက ဆရာအပေါ်သစ္စာရှိသယောင်နဲ့ ကျုပ်ကို အချောင်နှိုက်ချင်တာလည်း ကျုပ်က သိပါတယ်။ လင်အဆက်ဆက် အရှင်ထွက်ခဲ့ဖူးတဲ့မိအေးပဲ။ ဒီလောက်တော့ ဘယ်ညံ့မတုန်း။ အိမ်ထောင်ဘက်ဆိုရင်လည်း ဘုရားသမား၊ တရားသမားဆို တော့်အကိုကြီး ကိုရင်နုနဲ့တင် ဒိုးဆလံ၊ တင်းဆလံ၊ နှစ်ထပ်ဆလံပါပဲ…။ အတွင်းအဇ္ဈတ္တစိတ်ရိုင်းဝင်နေတဲ့ ရှင်လိင်ပျံ မောင်ဘသောင်းတော့ ဝေးကရော…။
ဒီကြားထဲ ကျုပ်အပေါ်အနိုင်ကျင့် ယုတ်မာနေတာတွေကို မခံနိုင်လို့ဆိုပြီး ကျုပ်ကိုတစ်ဖက်သတ် ကြိုက်နေတဲ့ဆယ်တန်း ကျောင်းသားကလေး ဇာနည်က မောင်စိန့်ကို သွားသွား ရန်စနေသေးတယ်။ ဇာ့နည်ခမျာလည်း ကျုပ်အတွက်နဲ့ မောင်စိန်က တိုင်လို့ အချုပ်ထဲ ဝင်ရတာက ခနခန…။ ဇာနည်လေးကို သနားလို့ သူအချုပ်ကျတဲ့အခါ သွားတော့တွေ့ချင်သားတော်။ ဒါပေမယ့် မောင်စိန်က သိတယ်မဟုတ်လား။ လူယုတ်မာလေ…။
တော်ကြာ ကျုပ်ကိုပါပတ်ရမ်းလို့ မောင်ဒေါင်းနဲ့ကျုပ် ရာသက်ပန်ပေါင်းရဖို့ အစီအဆင်တွေ ပျက်ကုန်မှ ဒုက္ခ။ ဒါ့ကြောင့် မိအေးခမျာ တော်ရုံကိစ္စလောက်ကို မေတ္တာနဲတဲ့မိန်းမရဲကြီးလို ဘာသိဘာသာ နေနေရတာပေါ့။
မောင်ဒေါင်းက တော်ရှာပါတယ်တော်။ “မမမိအေး ဘာမှပူနဲ့…။ မမိနဲ့ ကျွန်တော် တရားဝင်ပေါင်းရဖို့သာ မမိဘက်က ကြိုး စား။ တရားဝင်လင်မယားဖြစ်သွားရင် မမိရှေ့ ကျွန်တော်မားမားမတ်မတ် ရပ်ပေးမယ်” တဲ့။ အဲတော့လည်း ဟုတ်တာ မဟုတ်တာ အပထား။ သူ့စကားချိုချိုလေးနားဝင်ပြီး မိန်းမသားတန်မဲ့ ဟိုရုံးက လာပါ့ဦးဆို ပြေးလိုက်ရ…။ ဒီစခန်းကလာ ပါဦးဆို လွှားလိုက်ရပေါ့တော်။ ထမီစွန်တောင်ဆွဲ မနားတမ်းသွားနေရပေမယ့် မောတယ်လည်း အောင့်မေ့ပါဘူး။ ကိုယ်က ချစ်တာကိုးလို့…။
မောင်ဒေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ အားမရတာလေး တစ်ခုပဲရှိတယ်။ ကျုပ်နဲ့သူက ခိုးပေါင်းနေရတာဆိုတော့ ကိုယ်လေးလက်ဝန် ရှိလို့က မဖြစ်ဘူးလေ။ ကျုပ်က ဆေးထိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးစားမယ်ဆိုတော့လည်း သူကလက်မခံဘူး။ “မမမိအေးရယ် သဘာဝအတိုင်းပဲ ကောင်းပါတယ်။ သဘာဝကိုလွန်ဆန်ပြီး ထိမ်းချုပ်တဲ့ အဲဒီဆေးတွေက တစ်ချိန်ကျရင် ဒုက္ခပေးမှာ…။ မမမိအေးကို မောင်လေးက မောင်လေးအတွက်နဲ့ ဒုက္ခဖြစ်တာ မခံနိုင်ပေါင်။ ပုတ်သင်ညိုပဲ သုံးကြတာပေါ့…” တဲ့…။ ကျုပ်ကို ဒီကောင်လေးက အသေးအမွှားလေးကမစ ဂရုစိုက်ပြီး အဲသလောက်ချစ်ရှာတာ။
ဒါပေမယ့် အချိန်တန် သူ့ဝမ်းပူဆာရှာတော့ သူပြောတဲ့ပုတ်သင်ညိုက အဆင်သင့်ပါမလာဘူး။ သွားပြန်ယူဆိုတော့လည်း “ကျွန်တော်က တရားဝင်မဟုတ်သေးဘူးလေ မမိရဲ့…။ မမိရဲ့ကျူးတဲလေးထဲ ခနခန ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် လုပ်လို့ မကောင်းဘူး။ တော်ကြာ မောင်စိန်တို့ သိသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မတုန်း…။ မောင်လေးကို နားလည်ပေးပါ မမမိအေးရယ်။ လမ်းထိပ်က ဆေးဆိုင်မှာ မမိပဲ သွားဝယ်လိုက်ပါနော်”တဲ့။ သူပြောတာ ဟုတ်သလိုလိုတော့ ရှိသား။ အဲဒီတော့ လင်မရှိရင် မနေနိုင်တဲ့ကျွန်မမိအေးကပဲ ပဋိသန္တေမခရအောင် ထမီအသာမလို့ လူမသိသူမသိ ပုတ်သင်ညိုအဖမ်း ထွက်ရပြန်တာပေါ့….။ တကယ်တော့လည်း အချစ်စစ်ရင်၊ အပြစ်ပြစ်တွေ မမြင်ကြဘူးဆိုတာ ဟုတ်သားနော်။
အခုဆို ရပ်ထဲ၊ ရွာထဲမှာ လင်အတော်စုံခဲ့တဲ့မိအေး လင်ရွေးစရာလည်း မရှိတော့ပါဘူးတော်…။ ကောင်းကောင်း၊ မကောင်း ကောင်း မောင်ဒေါင်းနဲ့သာ တစ်သက်လုံးပေါင်းရတော့မှာပေါ့…။ မောင်ဒေါင်းကလွဲရင် နောက်ထပ် ဘယ်သူနဲ့မှ ဇန်တာ ဘယာများဖို့လည်း စိတ်မကူးတော့ပါဘူး။ ကျုပ်က သူ့ကို တကယ်ချစ်တာကိုးလို့….။ ကျုပ်အကြောင်း ကျုပ်အဖြစ်ကတော့ လောလောဆယ် ဒါပါပဲ ကိုရင်ဖိုးချုပ်ရယ်…။
နတ်ပြည်မှာ နတ်သမီးလေးတွေ တစ်ဖက်လေးငါးရာကြားက အပူသယ်ချစ်ဇနီးဟောင်း မိအေးရဲ့ခံစားချက်တွေကို စိတ် ရှည်လက်ရှည်နားထောင်ပေးတဲ့ ချစ်လင်သူတော်ကောင်းကြီး ကိုရင်ဖိုးချုပ်ကို ကျေးဇူးလည်းတင်ပါရဲ့….။
← ကာတွန်း ဂျိူကာ – ဖမ်းတယ်
ကာတွန်း လှိုင်မျိုး – ဆင်ဖြုတော်နဲ့ ပုဏ္ဏားများ၏ အကြံ →